Tamin'ny alàlan’ny taratasy misokatra ho an'izao tontolo izao taorian'ny COVID-19, ny Talen'ny Jeneralin’ny UNICEF dia manasongadina lesona dimy azo tsoahana avy amin'ny areti-mandringana manerantany
NEW YORK, 17 febroary 2021 – Manamafy ny fahatokisana ny vaksiny eran’izao tontolo izao, mamaha ireo sakana atrehan’ny tanora mahakasika ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fiadanana ara-batana sy ara-tsaina, miady amin’ny fanavakavahana, miatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro ary mamaha ny olan’ny hantsana nomerika, ireo no hetsika azo tanterahina ho an’ny ankizy izay nentin’ny COVID-19 teo amin’ny fiarahamonina iraisam-pirenena, araka ny nambaran’i Henrietta Fore, Tale Jeneralin’ny UNICEF, tao anatin’ny taratasy misokatra fanaony isan-taona.
Tao anatin’io hafatra io, izay nivoaka nandritra ny fiatombohan’ny fankalazana maneran-tany ny tsingerin-taona faha-75 an’ny UNICEF, i Henrietta Fore no nanazava ny fomba tokony hanararaotana ireo fotoana mety indrindra – izay nasehon’ny ady amin’ny valan’aretina – mba hahafahantsika manangana tontolo vaovao mendrika kokoa ny ankizy, eo am-panohizana hatrany izany ady izany.
« Ny tsingerintaona faha-75 an'ny UNICEF, izay manomboka ankalazaintsika ankehitriny dia mampatsiahy antsika fa ity fikambanana ity dia niforona tao anatin'ny krizy manan-tantara iray hafa taorian'ny Ady Lehibe Faharoa », araka ny nambaran’ny Tale Jeneralin’ny UNICEF. « Tamin'izany andro izany, ireo olana natrehin'ny ankizy tao anatin'ny tontolo iray ravan'ny ady dia tena mankadiry tokoa ka mora ny nihemotra teo anoloan’ilay asa niandry. Saingy isika dia nanarina indray izay afaka nanaovana izany. Natsangatsika ny rafitra ara-pahasalamana sy ho fiahiana ara-tsosialy vaovao manerana an'izao tontolo izao. Nofongorintsika ny nendra sy ny lefan-kozatra. Naorintsika ny Firenena Mikambana. Mila antsika indray ny tantara. »
Mikasika ny vaksiny, nampitandrina i Henrietta Fore momba ny fiantraika mahery vaika ateraky ny tsy fahatokisana ny vaksiny amin'ny fahafahantsika miatrika ny krizy COVID-19. Na dia miara-miasa amin'ny fanjakana, mpiara-miombon'antoka ary mpamatsy vola aza isika ho fanampiana amin'ny fividianana, fitaterana ary fandefasana vaksiny manerantany, hoy ny fanazavany, dia mila manamafy ny fahatokisantsika ireo vaksiny ireo ihany koa isika mba haneken’ny besinimaro azy ireo. « Raha tsy misy fahatokisana, araka ny voalazany, ny vaksiny dia tavoahangy tsotra vidiana amin’ny vidiny tena lafo ary manangona vovoka any amin'ny tobim-pahasalamana. »
Mikasika ny fahasalamana ara-tsaina dia nilaza i Henrietta Fore fa vao mainka nanampy trotraka ny fiakaran’ny tahan’ny fikorontanana ara-tsaina eo amin’ny ankizy madinika sy ny tanora ny COVID-19, ary mamporisika ny fiarahamonina iraisam-pirenena hanamafy ny ezaka efa ataony ao anatin’io sehatra io izany, hoy izy ao anatin’io taratasy io ihany. « Mila manokana ny tetibola tena ilaina amin’izany olana izany ny firenena rehetra. Mila itarina ihany koa ireo servisy misahana ny fahasalamana ara-tsaina, ary mila hamafisina ny fanampiana atolotra ireo tanora eny amin’ny fiarahamonina sy any an-tsekoly. Amporisihana ihany koa ny fampianarana ireo ray aman-dreny mba hahafahan’ireo zaza avy amin’ny fianakaviana marefo misitraka ny fanampiana sy ny fiarovana ilain’izy ireo ao an-tokantrano, » hoy izy.
Raha ny momba ny elanelana misy eo amin’ireo manana solosaina sy aterineto sy ireo tsy manana indray dia nilaza i Henrietta Fore fa ny fihibohana nanerana izao tontolo izao dia nampiharihary ny tsy fitoviana nentin’ny hantsana nomerika. Tamin’ny fotoana tsy maintsy nikatonan’ny sekoly rehetra ny taona 2020 dia 30%-n’ireo mpianatra eran’izao tontolo izao no tsy afaka nisitraka ny fampianarana ampitain-davitra ary vitsy dia vitsy tamin’izy ireo no nahazo fampianarana tsara kalitao. Araka izany dia tokony harenina ny fampianarana ary honerana izany elanelana ateraky ny solosaina sy ny aterineto izany, mba ho lasa fitaovana hahafahana mandinika ny fanabeazana sy mandroso haingana mankany amin’ny ho avy ireo fitaovana nomerika ireo.
Farany, nanamafy i Henrietta Fore tao amin’ny hafatra nentiny fa tonga eo amin’ny kihon-dàlana tsy azo ihodivirana isika. « Anjaran’ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny fanamorana ny fanarenana tsy manavaka na iza na iza, izay hanao laharam-pahamehana ireo fampiasam-bola manome vahana ny ankizy », hoy ihany izy. « Tamin'ity taona ity, 75 taona izao no nanorenan’ny UNICEF indray ny ho avin'ny ankizy tsirairay. Noho izany toe-javatra izany, andao isika hanohana ny ankizy sy ny tanora, miaraka amin’ny fahatsapana hamehana mba entina manorina fahafaha-manao ho azy ireo, mamelombelona ny nofinofin'izy ireo ary manampy azy ireo amin'ny dingana rehetra eo amin'ny fiainany. »
Hantsana nomerika eto Madagasikara:
Araky ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny Ivontoerana misahana ny antontan’isa momba ny fiantraikan’ny COVID-19 eo amin’ny fiainan’ny tokantrano tsirairay ny volana Jona 2020, dia hita fa ny famerenana ireo fampiasana taloha sy ireo lesona efa vita no paik’ady ampiasain’ny ankamaroan’ny tokantrano malagasy (61%) tao anatin’ny fotoana nikatonan’ny toeram-pianarana.
36,3%-n’ireo tokantrano nampiana-jaza nandritra ny vanim-potoana mialoha ny fihibohana andiany voalohany no nifandray tsy tapaka tamin’ireo mpanabe nandritra ny fihibohana, amin’ny alàlan’ny fifampiresahana mivantana.
Tokantrano 9 amin’ny 10 eo ho eo no manome vahana ny fifampiresahana mivantana hifandraisana amin’ireo mpampianatra, ao anaty fanajana tanteraka ny elanelana 1 metatra. Ambony kokoa izany taha izany eny an-drenivohitra (92,4%) raha oharina amin’ny any ambanivohitra (88,7%). 8,8%-n’ireo tokantrano fotsiny no mampiasa ny antso an-tariby ary vitsy dia vitsy (latsaky ny 3%) ireo mampiasa Facebook sy WhatsApp hifaneraserana amin’ny mpanabe.
Raha ny kalitaon’ny fampianarana indray no asian-dresaka dia asehon’ny fanadihadiana fa 23%-n’ireo ankizy 7 hatramin’ny 14 taona izay mankany an-tsekoly ihany no mahay mamaky teny, ary 7% fotsiny ihany ireo mahay kajy.
Raha ny resaka teknolojia amin’ny ankapobeny kosa indray dia hita fa 8%-n’ny vehivavy ary 12%-n’ny lehilahy no nampiasa aterineto tao anatin’ny 3 volana lasa izay.
Fanamarihana ho an’ny tonian-dahatsoratra :
Raha hijery ilay taratasy manontolo, tsidiho ny : https://www.unicef.org/madagascar/mg/tantara/fahafahana-mahazo-tombontsoa-dimy-ho-anny-ankizy-mila-araraotina-haingana
Raha hisintona sary, lahantsary ary votoaty fampitam-baovao, tsidiho ny: https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFB4L05P
Raha maniry hamaky ny drafitry ny UNICEF mirakitra teboka enina entina miaro ny ankizy amin’ny COVID-19, tsidiho ny : https://www.unicef.org/fr/recits/plan-en-six-points-pour-prot%C3%A9ger-nos-enfants
11 Martsa 2021
Ady amin’ny Covid-19 : Nahazo fanomezana « gel mains » avy amin’ny orin’asa Japoney Saraya ny governemanta Malagasy